Waa kuma Ciyaaryahanka sameeyay baasaskii ugu badnaa xilli ciyaareedkan? - Radio Risaala: Somali News Online
Home Ciyaaraha Waa kuma Ciyaaryahanka sameeyay baasaskii ugu badnaa xilli ciyaareedkan?
Waxay noqon doontaa cadaalad in la yiraahdo Jose Mourinho waa inuu ku qanacsan yahay sida kooxdiisa Tottenham Hotspur ay ku bilaabatay xilli ciyaareedkan.
Spurs ayaa fadhida kaalinta labaad ee kala sareynta – hal dhibic ayey ka hooseysaa kooxda hogaanka heysa ee Leicester City – iyadoo aan wax guuldaro ah la kulmin tan iyo isbuucii bilowga.
Kooxda ayaa ah kooxda labaad ee ugu sarreysa gooldhalinta horyaalka, iyadoo 19 gool dhaliyay, halka ay sidoo kale heysato rikoorka daafaca ugu fiican, waxaana laga dhaliyay sagaal gool.
Heung-min Son waa gooldhaliyaha ugu sareeya horyaalka, Harry Kane ayaa sameeyay caawinta ugu badan iyadoo Pierre-Emile Hojbjerg uu sameeyay baasaska ugu badan.
Mourinho ayaa 15 million kala soo saxiixday Southampton ciyaaryahankan laga hadlayo ee baasaska ugu badan dhameystiray.
659 baas ayuu siiyay saaxiibadiis taasoo ka dhigan inuu 21 jeer ka sareeyo daafaca Everton Michael Keane kaasoo kuso xiga.
Xilli ciyaareedkii la soo dhaafay, Virgil van Dijk oo Liverpool ka tirsan ayaa ahaa mid sameeyay baasaska ugu badan halka Xiddiga qadka dhexe ee Manchester City Rodrigo, oo haatan kaalinta shanaad kaga jira uu kalain fiican kasoo muuqday xili ciyaareedkii hore.
Previous articleSergio Ramos oo wacdaro ka dhigay Kulamada Caalamiga ah
Next articleHowlgallo culus oo ka socda Magaalada Boosaaso